नेपालमै गाडी उत्पादन गर्न कति सम्भव, यी हुन् गर्नैपर्ने काम
प्रकाशित : 4:34 pm, सोमबार, मंसिर २२, २०७७
काठमाडौं । नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्ने विषय अहिले चर्चामा रहेको छ । कोरियन कम्पनी मोट्रेक्सले नेपालमा गाडी उत्पादन गर्न लगानी बोर्ड मार्फत लगानी प्रस्ताव गरेपछि नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने विषयले चर्चा पाएको थियो । तर, विक्रम सम्वत २०५४ सालमा नै गोल्छा अर्गनाइजेशनले हुलास मोटर्सको स्थापनागरि नेपालमा गाडी उत्पादन शुरु गरेको इतिहास हामीसँग रहेको छ ।
अहिले गाडी उत्पादन वा एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्न केही कम्पनी नेपालमा दर्ता भएका छन् । ती कम्पनीले गाडी तत्काल एसेम्बल गर्लान वा नगर्लान त्यो अर्को कुरा भयो तर, पुनः एक पटक नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने विषयले चर्चा भने पाएको छ । यहाँ नेपालमा गाडी उत्पादन वा एसेम्बलको चर्चा गरिरहँदा हुलास मोटर्स किन बन्द भयो भन्ने विषय थाहा पाउन भने आवश्यक हुन्छ ।
२०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नेपाली उत्पादन भनेर हुलासको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेका थिए । त्यतिबेला खुबै चर्चा पाएको हुलासको गाडी भट्टराईको कार्यकाल सकिएको कहि समयपछि नै पूर्णरुपमा बन्द भयो । यो प्लान्ट किन बन्द भयो भन्ने विषयमा न गाडीका पारखीले चासो राखे, न त सरकार संचालक वा नेपालमा नै गाडी बनाउनु पर्छ भन्ने समूहले बुझ्न चाहे ।
सरकारले लिएको नयाँ प्रदूषण मापदण्डको शिकार भएको हुलास मोटर्सले त्यति बेला यूरो १ बराबरको सवारी उत्पादन गर्दै आएको थियो । एक्कासी यूरो १ बाट यूरो ३ वा सो–सरहको ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड ३’ लागू हुँदा कम्पनीले केहि थप समय माग गरेको थियो तर, राज्य संचालकले त्यो उद्योगलाई बचाउन कुनै चासो दिएनन् । हुलासले थप समय पाएन । र, अन्ततसः हुलासको मुस्ताङ गाडी सदाको लागि बन्द भयो ।
नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने हो भने उसले वा अन्य उद्योगीले खोल्ने सहायक कम्पनीहरु खुल्ने आधार सरकारले तयार गर्नु पर्छ । सवारी साधनमा लाग्ने पार्टस्को सुरुवातमा नै ५ देखि १० प्रतिशत उत्पादन नेपालमा नै बनाउन सक्ने हो भने भविष्यमा नेपालमा नै गाडी उत्पादन वा करिब ६० देखि ७० प्रतिशत लोकल पार्टस्को प्रयोग हुने अवस्था आउन सक्छ
अहिले हुलासले यहि प्लान्टमा इलेक्ट्रीक रिक्साको उत्पादन गरिरहेको छ भने इलेक्ट्रीक कार उत्पादन गर्न दिनरात नभनि काम गरिरहेको छ । तर, अहिलेपनि उद्योगको गुनासो भने जहाँको त्यहिँ रहेको छ । इलेक्ट्रीक कारमा बढाइएको कर र पार्टस आयातमा हुने कठिनाईलाई कम गर्न राज्यले कुनै सहायता नगरेको उसको गुनासो छ ।
अहिले चर्चामा रहेको नेपालमा कार एसेम्बल प्लान्टको विषयमा थप कुरा गर्नुअघि यी ४ कुरालाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
१. संभावित बजार : नेपालमा गाडी उत्पादनको चर्चा शुरु हुनु राम्रो पक्ष भएपनि अहिलेको बजारलाई हेरेर आवश्यकता र संभावना पर्गेल्नु पर्छ । हामी कहाँ अहिले वार्षिक १२ देखि १५ हजार यूनिट कारको विक्री हुने गर्दछ । यति गाडी विक्री गर्न करिब १५ भन्दा धेरै ब्राण्डले आफ्ना उत्पादन विक्री गर्दै आएका छन् ।
अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा कार विक्री गर्ने कम्पनीले मुस्किलले ४ हजार यूनिट गाडी विक्री गर्दै आएको छ । ४ हजार यूनिट कार विक्री गर्दा उसले ८ देखि १० मोडल विक्री गर्दै आएको छ । यस्तोमा नेपालमा नै उसले विक्री गर्ने सम्पूर्ण सवारी साधन उत्पादनको सम्भावना रहँदैन । विभिन्न रिपोर्टका अनुसार नेपाल जत्रो देशमा एउटा ब्राण्डको २/३ वटा मोडल वार्षिक ६ हजार यूनिट विक्री गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै कुनै पनि ब्राण्डले लगाउने एसेम्बल उद्योग राम्रोसँग संचालन हुन सक्छ ।
२. सहायक कम्पनी : नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने हो भने उसले वा अन्य उद्योगीले खोल्ने सहायक कम्पनीहरु खुल्ने आधार सरकारले तयार गर्नु पर्छ । सवारी साधनमा लाग्ने पार्टस्को सुरुवातमा नै ५ देखि १० प्रतिशत उत्पादन नेपालमा नै बनाउन सक्ने हो भने भविष्यमा नेपालमा नै गाडी उत्पादन वा करिब ६० देखि ७० प्रतिशत लोकल पार्टस्को प्रयोग हुने अवस्था आउन सक्छ ।
विशेषत: प्लाष्टिक र फलाम जन्य पार्टस्को उत्पादन नेपालमा नै बढाउँदै लानु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि राज्यले दिने सेवा र सुविधा महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि सहायक कम्पनीहरु खुल्दै गएको खण्डमा दिर्घकालीन फाइदा गाडी उत्पादन गर्ने उद्योगबाट राज्यले लिन सक्छ ।
३. लगानी सुरक्षा : कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो लगानी सुरक्षीत नदेखेको क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । त्यसमा पनि नेपाल जस्तो नीतिगतरुपमा अस्थिर देशमा लगानी विस्तार गर्नुअघि हरेक उद्योगीले लगानीको सुरक्षा खोज्छ । त्यसको लागि सरकारले लगानी गर्ने उद्योगलाई विशेष उद्योगको दर्जामा राखेर सेवा सुविधा प्रदान गर्नु पर्छ ।
गाडी एसेम्बल गर्ने जस्तो विषय हाम्रो यहाँका उद्यमी व्यापारीले चाहँदैमा सम्भव हुँदैन । यो पूर्णत टेक्नोलोजीमा आधारित उद्योग हो । त्यसका लागि गाडी उत्पादक कम्पनीहरुले नेपालमा व्यवसायीक संभावना देख्नु पर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा विक्री हुने हुन्डाई, महिन्द्रा र टाटा जस्ता कम्पनीले बेला बखतमा यहाँको सम्भावनालाई नजिक बाट नियाल्दै आएका छन् । सायद त्यसैको परिणाम स्वरुप हुन्डाईले नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्न उद्योग नै दर्ता गराई सकेको अवस्था छ । यदि नेपालमा विदेशी गाडी एसेम्बल हुने हो भने नेपालमा प्रविधि पनि भित्रने छ ।
४. राम्रो प्रतिफल : प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा लगानी आउँदैन । प्रतिफलको ग्यारेन्टी बजारले निर्धारण गर्छ । त्यसमा पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा राज्यले नै आवश्यकताको हिसावले अनुदान, सहुलियत वा छुटहरु प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ । विना राज्यको सहयोग कम्पनीहरुले नेपालमा गाडी उत्पादन शुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्लान्ट स्थापनासँगै जोडिएर रोजगारी र कर जस्ता विषय आउने हुँदा यसले दिर्घकालिन रुपमा नेपाललाई फाइदा नै गर्ने छ ।
माथि उल्लेख गरिएका विषयमा सरकार, नीति निर्माता र उद्योगीहरुको एकमत कायम भएको खण्डमा मात्रै नेपालमा गाडी एसेम्बल हुँदै उत्पादनको संभावना खोज्न सकिन्छ । अन्यथा बेला बखतमा समाचारहरुमा बाहेक फिल्डमा गाडी उत्पादन प्लान्ट सम्भव देखिदैन ।
« बजार फेरी आफ्नै लयमा, ठूलो करेक्सन अघि अझै केही सय अंक बढ्ने लगानीकर्ताको विश्वास
नेपाल इयूको कालो सूचीबाट छिट्टै हट्दै »